ASA Film Extrusion Line - Mpamatsy tsipika mpanala sarimihetsika China ASA, orinasa –Jwell
Ny sarimihetsika ASA dia ampiasaina amin'ny fonosana sy amin'ny laminaty. Ny vokatra fonosana plastika sy ny fonosana plastika dia lasa malaza eo amin'ny tsena, indrindra ny fonosana malefaka plastika mitambatra sy ny firakotra amin'ny fananganana fitaovana
Noho ny fananana miavaka amin'ny fanoherana ny fahanterana, ny sarimihetsika ASA dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny tafo vita amin'ny tafo. Mandritra ny fizotran'ilay tafo tanimanga, dia mety hahatratra ny fitambarana hafanana an-tserasera, miaraka amin'ny hatevin'ny fanamiana, tsy misy fahasamihafana eo amin'ny loko sy ny tanjaka avo fatorana. Mandresy ny tsy fitovizan'ny loko ny fitambarana ASA mitambatra nentim-paharazana, ary mampihena ny vidin'ny akora.
Visy sy barika kambana mitovy